မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: So So, Bad and Not watched Dramas of 2012
Posted by mabaydar at 4:20 PM
I do, I do နဲ့ Faithကိုတော့ကွိုကျ၏
i have finished reading. i watched the faith and i love it. for Hana Kimi i like the Tiwan version. may be cos of i like Ella. the rest haven't watched. good writing sis. pls continue for travelling post. :) both korea and Aus
5/28/2013 1:30 PM
ဟာဂျီဝန်ကြိုက်တာ တူတယ် သူ့ကိုတော့လူတိုင်းကြိုက်တယ်ထင်တယ် ဂျန်နာရာတော့ တို့လဲသိပ်မကြိုက်ဘူး သေးသေးကွေးကွေးနဲ့ ဟိုအရင်က မြဝတီမှာလာတဲ့ ဟာဂျီဝန်သိုင်းကားတကား ပြန်ကြည့်ချင်လို့ နာမည်မမှတ်မိဘူး သူကမိဘတွေအသတ်ခံရပြီး အကိုနဲ့လဲကွဲ အကိုက သူပုန်ဖြစ်နေတာလေ
ELLA ကို မကြိုက်တာချင်းတူနေပြီ HANA KIMI ကို KOREA VERSION တော့ မကြည့်ရသေးဘူး The king2hearts လည်း ဟုတ်ပ အစပိုင်း ဟုတ်သလိုလိုနဲ့ ဂယ်ဘဲ Five Fingers ကကျတော့ ဇွတ် Time traveller ကားထဲမှာRoof top prince ဘဲနည်းနည်းခံစားလို့ ရတယ်
@Sandi - I like Ella when singing but not acting.... hee hee... Thanks for the comment... stay tuned
@၀ိုင်း ပြောတဲ့ကားက Damo ထင်တယ်။ အဲကားတော့ မကြည့်ရသေးဘူး။ ကောင်းတယ်လို့တော့ကြားတယ်။ အရင်က ဟာဂျီဝန်းကို Sex is Zero ကား ပထမဆုံးကြည့်ဖြစ်ပြီး သိပ်သဘောမကျဘူး... ဒါပေမဲ့ Hwan Jin Yi မှာ သူ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတာကို လက်ခံရင်းကြိုက်သွားတာ။
@AMT - Ella နဲ့ Jerry Yan ကားတောင် Jerry ကြည့်ချင်တာရယ်၊ ဇာတ်လမ်းသဘောကျတာရယ်ကြောင့်ကြည့်မလို့၊ Ella ကြောင့် နားနားပြီးကြည့်နေရတယ်။။။ (Ella's Fan တွေကိုတော့ တောင်းပန်တယ်နော်)... hee hee.. :P
5/29/2013 3:51 PM
i like ur blog.... now i m reading all of ur post one by one.... Thks ....